Natural Way to whiten Ezé Easy | Best Way to whiten Ezé Guide
Natural Way to whiten Ezé Easy
Ọ bụrụ na ị chọrọ eke ụzọ whiten ezé-enweghị ịzụ ndị niile dị oké ọnụ ngwa iwu, dị nnọọ laghachi ochie. Jiri home ịgba akwụkwọ na nne nne na mama eleghị anya ugbua mara. Ọ bụrụ na e nwere onye na mgbu, mgbu, ịkpụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, e mgbe niile bụ ihe ngwọta ma ọ bụ na-agwọ ya ezo si na kọbọd ebe. Otu na-emetụta ezé enwu gbaa. Tụlee eke ụzọ whiten ezé n'okpuru na-tụrụ nke nsonaazụ ndị na-eji.
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya strawberries na N'ezie na-adịghị anabata ya, eme ka ụfọdụ strawberry shortcake na whiten ezé gị n'otu oge. Strawberry bụ a eke ụzọ whiten ezé. Dị nnọọ bee a nnukwu strawberry na ọkara na ebe n'ọnụ gị. Jide n'aka na n'ime n'obodo gị ọnụ. -Ete niile na now strawberry ihe ọṅụṅụ na strawberry nile gị ezé ruo mgbe ha na-niile kpuchie na pink. Chere a mma nkeji iri na mgbe ahụ na-eji gị ntacha eze. Gị ntacha eze N'ezie kwesịrị niile eke na ọ dịghị Abrasives ma ọ bụ ọzọ na-emerụ mmetụta. Dabere na otú acha ọcha na ị chọrọ, -eme nke a ugboro abụọ n'ụbọchị mgbe i abọ ugboro abụọ n'ụbọchị. ogologo-ntachi-, ụbọchị ọ bụla ị ga-ahụ ndammana acha ọcha ezé. Nke a na-ga-enyere na kọfị stains na ihe ọ bụla ọzọ iji belata stains on ezé gị.
Na-ekwukarị nke mmiri soda maka ezé gị. Ọ bụrụ na i nwere adịghị, mgbe ahụ ị bụ nnọọ, dị obere. Onye ọ bụla n'elu iri anọ na afọ iri ise maara mama ma ọ bụ nne nne na mmiri soda bụ eke ụzọ whiten ezé site nnọọ asa ezé. Ee, ma eleghị anya, ntacha eze e ji mee ihe. ma, ọ bụrụ na ị nwere Ọgbọ nne na nna, mmiri soda mgbe niile na ndepụta. Ee, ọ dị ihe o na-arụ ọrụ na bụ ndị na-abụghị abrasive. Jiri naanị otu ụzọ n'ụzọ anọ mgbe asa ezé dị ka nke a bụ a eke ụzọ whiten ezé. Dị nnọọ nweta gị atu mmiri na mikpuo ya n'ime mmiri soda. Mgbe brushing iwepu uto, eji niile eke ọnụ asacha n'ihi na dị ọcha minty mmetụta. ugbu a, ị mụtara a nnọọ agadi gaferela eke ụzọ whiten ezén'ụlọ.
Anyị niile na-eji mmanya ọcha na. The ihicha ngwaahịa na ịzụta nwere mmanya na ya ebe, ma ọ bụrụ na ha na-n'ezie eke. agbanyeghị, eke ụzọ whiten ezé na home, -eji nanị na-acha ọcha mmanya na ihe dị ka ọkara a cup. Tụkwasịkwa ihe a tablespoon nke nnu ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị. The nnu enyere ikesiike gị úkwù ezé na agbụ na ndị chọrọ nlezianya na ọbara ọgbụgba. Ọ bụ eke usọbọ iji nyere aka. Tupu ị lakpuo ụra n'abalị, dị nnọọ iji ya dị ka mouthwash na itucha juputara. Ezé gị ga-esikwu ike ma na-egosi a mara mma ịchị ọchị.
Ọ bụrụ na ị bụ umengwụ ma na-amụta na ndị niile na usoro esi whiten ezé n'ụlọ anya kwa ike, dị na-eji Mint ntacha eze. Iji ya na ihe abụọ na-ugboro atọ n'ụbọchị. Ezé gị ga-maa na-egbukepụ egbukepụ nnọọ ngwa ngwa. Ị nwere ike dị ka nke ọma sọfụ n'elu internet iji kpokọta ozi ọzọ banyere echiche banyere eke ụzọ whiten ezé.
Categories: Whiten Ezé Atụmatụ Tags: eke ụzọ whiten ezé, strọberị, ntacha eze, whiten ezé